Tsy mahay tsy miady amin’izao… | NewsMada
Tsy mahay tsy miady amin’izao…
Amin’izao fihanaky ny valanaretina Covid-19 tena mampatahotra be izao, tsy mahay tsy miady na tsy maintsy miady ny tena. (Avy amn’ny hoe “tsy mahay tsy” no niavian’ny hoe “tsy maintsy”). Tsy mahay tsy mipetraka amin’izao fahamehana ara-pahasalamana izao izay mbola mahatsiaro tena ho olom-pirenena tompon’andraikitra, mbola afa-manao sy mahavita izay azony atao…
Tena mampatahotra be ny fihanaky ny valanaretina: anjatony isan’andro ny isan’ny tranga vaovao amin’ny fitondrana tsimokaretina. Soa ihany, anjatony hatrany koa ny marary sitrana isan’andro: be no ho ny mbola tsaboina ny fitambarany. Na izany aza, eo ihany ny maty saika ho isan’andro. Saika mitombo koa ny faritra ahitana ny olona mitondra tsimokaretina Coronavirus.
Amin’izany rehetra izany, mbola ao anatin’ny ady tanteraka ny rehetra: ady iombonana, ady lehibe, ady mafy… Tsy mahay tsy mipetraka amin’izao ny tsirairay, na tsy maintsy mihetsika ny rehetra: miaro tena, miaro ny hafa koa. Fifanohanana izany, firaisankina. Tsy azo atao ny mihalangalana na manilika ny hafa. Raha tsy izany, manome laka ny fahavalo efa mihanaka, tsy mitsitsy…
Tsy ahombiazana amin’ny ady koa ny fiheveran-tena ho hany manana ny marina, mahavita irery… Tsy fantatra hoe rahoviana marina no hifarana ny ady hibatana fandresena. Izay no tsy itompoana teny fantatra, fa lazon’ady izao. Eo ihany ny hoe henjana sy hentitra ny fanaraha-maso ireo fepetra, ny fanasaziana sy famaizana amin’izany. Ny fitsaboana koa izao no raharaha be.
Tsy vitan’ny fisorohana fiparitahan’ny valanaretina na fiarovan-tena fotsiny amin’izany izao, fa tsy maintsy atrehina ny fitsaboana ireo mitondra tsimokaretina na efa marary na tsia: ady iray, ady roa. Mafy, sarotra, maharitra…? Mba tsy ny samy mpiady indray no tsy mahay mifandamina fa miady an-toerana, sanatria, fa tsy mahay tsy miady na tsy maintsy miady amin’izao…
Rehefa tena mafy ny ady? Izay mafy no miady, fa tsy miady an-toerana raha hoe tsy maintsy miady.